County dia nanambara ny fiovana amin'ny fizarana vaksiny - princetoncovid.org
Fiaraha-miasa fiaraha-monina amin'ny tranombokim-panjakana Princeton, ny Kaominin'ny Sekolim-panjakana Princeton sy Princeton.
Fanavaozana ny tanàna
Fitsipika sy tolo-kevitra ankehitriny
Cases eo an-toerana
Mijanona ho mifandray
Fampahalalana momba ny vaksiny
Manomeza na mahazo fanampiana
Miasa / Tsy An'asa
Raha mahatsiaro marary ianao
County dia nanambara ny fanovana ny fizarana vaksininy
Febroary 11, 2021 Febroary 11, 2021
Ny Diviziona Fahasalamana Mercer County dia nanambara tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity fa nanao fanovana kely tamin'ny fizarana vaksinina mifototra amin'ny torolalan'ny Departemantan'ny fahasalamana ao amin'ny NJ. Mba miangavy re kitiho eto ho an'ny Fanavaozana ny Vaksinin'ny 10 Febroary.
** Azafady mba mariho: Raha manana doka faharoa voalahatra miaraka amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana Princeton ianao dia hahazo izany fatra izany amin'ny daty voatondro. **
Misoratra anarana amin'ny vaksiny - Midira amin'ny lisitra fiandrasana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Rafitra fanomanana fandaharana vaksiny New Jersey. Ny famenoana ny fisoratana anarana mialoha ny fisoratana anarana dia maharitra 15 minitra. Hanontaniana fanontaniana vitsivitsy ianao hamaritana ny fotoana hahafahanao mahazo vaksiny. Raha manana olana ara-teknika amin'ny fisoratana anarana ianao dia antsoy ny laharam-pahamehana fanampiana amin'ny fandaharana COVID amin'ny (855) 568-0545 na fenoy ity Forme fanampiana.
Lisitry ny fiandrasana efa misy - Raha ao amin'ny lisitra fiandrasana Princeton ianao dia hifandray aminao ny Diviziona Fahasalamana Mercer County sy / na ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamana Princeton rehefa voafidy ho amin'ny fotoana voatendry ianao. Raha ao amin'ny lisitry ny laharana ianao ary mahazo ny vaksininao any an-kafa, azafady mailaka ny Departemantan'ny Fahasalamana monisipaly dia hesorina amin'ny lisitra fiandrasana. Aza mifandraisa amin'ny departemanta momba ny fanendrena na ny lisitra fiandrasana.
princetoncovid.org, Pireharehana Powered by WordPress.